MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA TERRIER DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Terrier Dog
Sophie, 1 sano (hore) iyo Oscar, 9 bilood. (gadaal), xushmadda sawirka Jenelle L. Harden
Liiska Xuduudaha Terrier Mix Mix Eeyaha
Xadka Xadka waa eey yar oo dhexdhexaad ah oo laf adag. Garbaha iyo jidhku waa cidhiidhi yihiin. Farqiga u dhexeeya indhaha dhexdooda ayaa ah mid aad u ballaaran. Afka ayaa gaaban oo caadi ahaan mugdi ah, oo leh waxoogaa yar, oo joogsi dhexdhexaad ah. Sanku waa madowyahay. Ilkaha ayaa ku xoog badan maqas qaniinaan. Dhegaha yaryari waa kuwo V-qaabeeya, oo loo dhigay dhinaca madaxa, hoos ayeyna ugu sii siqayaan meel ku dhow dhabannada oo badiyaa midabkoodu madow yahay Indhaha dhexdhexaadku waa midab madow. Lugaha hore waa toosan yihiin oo ma cusla. Dabada dhexdhexaadka ahi way ka sii dhumuc weyn tahay salka iyo taabashada. Soohdimayaasha Xudduudda waxay leeyihiin jaakad gaaban, cufan leh, oo laba jibbaaran oo gaduud ah, kuleylka ah iyo tan, buluug iyo cagaar, ama sarreen. Waxaa jiri kara qadar yar oo cad oo xabadka ah. Xuub mugdi ah ayaa laga doonayaa giraanta showga.
Terrier Border waa ugaarsade yar oo geesi ah. Aad u dhaqso badan, waxay diyaar u tahay inay ku cidhiidhiso meel cidhiidhi ah si ay u soo qabato dhagax kasta oo dhinaca kale yaal. Nolol, waxay ku raaxaystaan ​​la ciyaarista carruurta. Eeyaha kalgacalka leh, ee dabeecada yar-yar ee ujeedkoodu yahay inay ka farxiyaan milkiilayaashooda ayaa ka dhigaya mid si fudud loo tababaran karo. Terrier-kan adag, cabsida badan, terrier-ka yar waa ilaaliye wanaagsan, waana laga yaabaa inuu ciyo, laakiin ma ahan mid dagaal badan. Hubso inaad si fiican ula dhaqan . Eydu waa in ay caadeystaan ​​buuq badan inta ay weli da 'yar yihiin si looga fogaado xishood la'aanta xad dhaafka ah. Ey-yaryadu iyo Qaan-gooyeyaasha Xudduudda Dhalintu aad ayey u firfircoon yihiin, laakiin way kala jajaban doonaan marka ay qaangaaraan haddii ay helaan jimicsi fara badan. Xuduudaha Xuduudaha waxay jecel yihiin inay qoddaan waa fikrad wanaagsan in lagu rakibo xoojin dheeri ah dhinaca hoose ee dayrarka. Wanaagsan bisadaha qoyska haddii lala dhaqmo iyaga, si kastaba ha noqotee, ugaarsigan ugaarsigu wuxuu leeyahay dareen xoog leh oo aan lagu kalsoonaan karin xayawaanka aan xayawaanka ahayn sida hamster , doofaarka guinea , bakaylaha , iyo shimbiraha . Hubso inaad had iyo jeer tahay eeygaaga mid adag, kalsooni leh, hogaamiye xirmo joogto ah, si aad uga fogaato Cudurka Dog yar , iyo kala-go'id walaac .
Dhererka: Ragga 13 - 16 inji (33 - 41 cm) Dumarka 11 - 14 inji (28 - 36 cm)
Miisaanka: Ragga 13 - 16 rodol (6 - 7 kg) Dheddigga 11 - 14 rodol (5 - 6 kg)
Cudurka Canine Epileptoid Cramping Syndrome (CECS), oo sidoo kale loo yaqaan 'Cudurka Spike.' Tani waa dhibaato caafimaad oo dhawaan la aqoonsan yahay oo ah cudurka kaneecada iyo cudurka kaneecada ee dhaxalka ee Xuduudaha. Waxay mararka qaarkood ku jahwareeri kartaa suuxdinta maqaarka. Waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa inay tahay dheef-shiid kiimikaad, neerfaha ama murqaha.
Soohdinta Xudduudda kuma wanaagsanaan karto aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Waxay dhex dhexaad uga yihiin gudaha gudaha daarad yarna waa ku filan tahay.
Xadgudbayaasha Xudduudda waxaa loo soo saaray inay ugaarsadaan oo ay yeeshaan firfircooni iyo xoog. Waxay u baahan yihiin jimicsi fara badan, oo ay ku jiraan a socod dheer maalin kasta .
2 - 8 eyyo, isku celcelis 4 - 5
Jaakad waarta, jaakad qoyan ayaa loo baahan yahay in la cadeeyo todobaadle ah oo si xirfad leh loo qurxiyo laba jeer sanadkii. Shaygu waa muuqaal dabiici ah gebi ahaanba. Xudduudku wuxuu daadiyaa timo yar waxuuna u roonyahay kuwa xasaasiyadda qaba. Maydho oo keliya markii loo baahdo.
Waxay ahayd buuraha Cheviot Hills ee ku dhow xadka England iyo Scotland markii ugu horreysay ee Xudduudda Xudduudda la cuno. Noocani waa suuragal inuu yahay mid ka mid ah noocyada ugu da'da weyn ee ugaarsooyinka ee Ingiriiska. Beeraleyda waxay dhibaato ku qabeen dawacooyinka inay dilaan keydkooda waxana Xuduuda Xuduuda ay ka wada shaqeeyeen si ay dawacada uga saaraan boholahooda una dilaan. Way yaraayeen oo waxay raaci jireen dawaco dhulka lakin way weyntahay inay la socdaan fardaha. Eeyaha badanaa looma quudin beeraleyda iyagoo rajeynaya inay ugaadhsiga ugaadhsiga ka dhigto mid ka sii sareeya oo waxay ahayd inay ugaarsadaan si ay u noolaadaan. Dawaco ay weheliyaan waxay ugaarsadeen otter, marten, badgerka ba'an, jiirka iyo jiirka. Maanta inta Xudduudda Xudduudda ay badanaa tahay eey wehel ah, haddana wuxuu u adeegi karaa inuu noqdo eey wanaagsan oo beer ah, isagoo gacan ka geysanaya sidii loo xakamayn lahaa cayayaanka. Xudduudda Xudduudda waxaa aqoonsaday Naadiga Xannaanada Ingiriiska sanadkii 1920 iyo Naadiga Kennelka Mareykanka ee 1930. Qaar ka mid ah hibooyinka Xadka Terrier waxaa ka mid ah: ugaadhsiga, daba-galka, ilaalinta, firfircoonida, u hoggaansanka tartanka iyo qabashada tabaha.
BTCA = Naadiga Terrier-ka Xadka ee Ameerika, Onc.
Kani waa Tigi our Xuduudaha Terrier eey ee toddobaadyada 12 markay sameyneyso filimkeedii ugu horreeyay.
Kani waa Tyler, oo ay leeyihiin Jim iyo Kathy Robinson. Lahaanshaha sawirka 'Terris Xord Terriers'
Hamish the Terorder Terrier markuu jiray 6 sano, laakiin weli waa eey wadnaha ku yaal, oo sidaad u aragto wuxuu ku raaxeysanayaa hurdo bisadaha. Hamish waa wiilka Tyler (Tyler sawirka kore).
Horyaalka Mareykanka iyo Kanadiyaanka KayLee ee u orda Xuduudaha, Master EarthDog aka 'Jake' — Jake waxaa iska leh oo kharribmay Lee iyo Kay Anderson oo ka tirsan Shady Cove, AMA, USA.
Vera oo 7 sano jir ah (midig) iyo Graham oo 5 jir ah (bidix)
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ku saabsan Terrier Terorder
Sawirada Terrier Terorder 1
Xuduudaha Terrier Sawirada 2
old ingiriis bulldog feeder mix
boqorka adhijirka Australiya charles iskudhafka cavalier
eey bunni ah oo sanka madow leh
st. bernard Jarmalka adhijir isku darka
eyga buur bernese iskudhafka iskudhafka biraha